Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 08
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 08
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 08
Jesu akaparidza mufananidzo wemukushi kuvanhu vazhinji vaive vakaungana vachibva kumaguta ose.
RUKA 8:5 Mukushi wakabuda kundokusha mbeu dzake; wakati achikusha, dzimwe mbeu dzakawira panzira, dzikatsikwa, shiri dzokudenga dzikadzidya.
Bhaibheri imbeu inokushwa mumoyo yevanhu yokura.
Diaborosi anobvisa shungu dzose dzinevanhu kubva paBhaibheri. Sainzi dzinoita izvi netsananguro dzeBig Bang nedzeshanduko yevanhu kubva kumhuka. Vanoti Bhaibheri ringori bhuku rakanyorwa nyaya kuitira vanhu vasina zivo, uye hachisi chokwadi. Vanhu, nekuda kuti vanzi vakangwara, vanotenda kutadza kwese uku vobviswa pana Mwari. Zvese izvi ndezvekanguva kaduku kekuti munhu angonzi akangwara. Zvoteverwa nekurasikirwa uye nekuziva kuti wakanyengerwa kusingaperi.
RUKA 8:6 Dzimwe dzakawira paruware, dzikamera, dzikawoma, nokushaiwa mwando.
Mbeu inomera pasina ivhu zhinji haiiti midzi. Vanhu vasina kudzika midzi paruzivo rwemuBhaibheri havakwanisi kukunda miyedzo vanokundikana. Dambudziko guru: vane nungo kwazvo kana kuti vane zvakawanda zvekuita zvekutadza kuverenga Bhaibheri.
RUKA 8:7 Dzimwe dzakawira pakati peminzwa; minzwa ikakura pamwechete nadzo, ikadzivhunga.
Vanhu vanovhungwa nezvido zvenyika ino zvakaita sepfuma kana mafaro, havana zvibereko zvekururama zvavanozobereka.
Dambudziko guru: Kuzvikoshesa uye kukoshesa zvinhu zvenguva duku zvatinowana muhupenyu. Hapana tariro yenguva refu.
RUKA 8:8 Dzimwe dzakawira muvhu rakanaka, dzikamera, dzikabereka zvibereko zvinezana.
Akati apedza kutaura zvinhu izvi, akachema, Uyo ane nzeve dzekunzwa, ngaanzwe. Vanhu vane moyo yakavimbika yakanaka, kana vanzwa Shoko, vanorichengeta, vobereka zvibereko zvine kutsungirira.
“Ane nzeve dzekunzwa, ngaanzwe.”
Iri izanhi rakabayirwa nguva yega yega yemakereke kupfuura makore 2 000 enguva dzemakereke munhorondo yevaHedeni, kuteerera Bhaibheri ndiyo nzira kuhupenyu husingagumi.
ZVAKAZARURWA 2:7 Une nzeve dzekunzwa, ngaanzwe zvinoreva Mweya kukereke;
RUKA 8:9 Zvino vadzidzi vake vakamubvunza, kuti mufananidzo uyo wairevei?
Jesu akaparidza mufananidzo uyu kuvanhu vazhinji asi vadzidzi vake voga ndivo vakabvunza kuti wairevei.
RUKA 8:10 Akati: Imi makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zvovushe bwaMwari; asi vamwe vanozvipiwa nemifananidzo kuti vachivona, varege kuvona, vachinzwa varege kunzwisisa
Bhaibheri rakanyorwa neimwe nzira kuitira kuti avo vanodisisa kuziva uye vanotsvagisisa mhinduro vacharinzwisisa. Avo vanofunga kuti mune zvakakanganiswa muBhaibheri, kana kuti pane zvimwe zvikamu zveBhaibheri zvisina kukosha, havafi vakakwanisa kupinda muzvakavanzika zvakavanza chokwadi kubva pamaonero edu emazuva ose.
RUKA 8:16 Hakunomunhu unoti kana atungidza mwenje, unozoufukidzira numudziyo, kana kuisa pasi pomubhedha; asi unouisa pachigadziko, kuti vanopinda vavone chiedza.
Bhaibheri chiedza uye chiedza chose chakanaka uye chakakosha. Musaedze kuviga chero chiedza cheBhaibheri. Musafadzwe nekusaziva kwenyu zvikamu zveBhaibheri. Musataure kuti mune zvakakanganiswa muBhaibheri. Hamuna chinhu chisina kukosha muBhaibheri. Kana vhesi reBhaibheri rikarwisa zvaunotenda mazviri, iwe ndiwe uri kutadza. Kana usingakwanisi kutsanangura zvinorehwa nevhesi remuBhaibheri, usavanze kusaziva kwako. Bvunza. Rangarirai, chokwadi hachina kuziviswa kukereke yenyu chete. Vamwe vanokwanisa kukudzidzisai.
RUKA 8:18 Naizvozvo chenjerai mutovo wamunonzwa nawo, nokuti unazvo uchapiwa; usina uchatorerwa naichecho vo chaanoti unacho.
Tendai mudzidze mukurukure nezveBhaibheri, Mwari uchazivisa zvizhinji kwamuri. Kubvisa zvidimbu zvamunoti “zvakaipa” kana “zvisina kukosha” nekukasika mucharasikirwa nechidimbu chekunzwisa chamaive nacho.
RUKA 8:21 Akapindura, akati kwavari: Mai vangu navanun’una vangu ndivo vanonzwa Shoko raMwari vachiriita.
Kunzwa nekuita zviri muBhaibheri ndiyo yega nzira inotiswededza paruwadzano naJesu.
Pano panouya chiitiko chinoitwa nevanhu chaicho. Vachifamba zvine rugare muhupenyu, vadzidzi vakasiya Jesu sezvo vaive vasina basa naye, saka akarara. Asi pakangotanga kuipa zvinhu, vakabva vatanga kumutsvaga.
RUKA 8:22 Zvino nerimwe ramazuva iwayo, wakapinda mugwa navadzidzi vake, akati kwavari: Ngatiyambuke mhiri kwegungwa. Vakaenda.
23 Zvino vakati vachienda iye akavata: dutu guru remhepo rikauya pagungwa, vakatanga kuzarirwa nemvura, vakava munjodzi.
24 Vakavuya kwaari, vakamumutsa, vachiti; Tenzi! Tenzi! Tofa! Ipapo akamuka akaraira mhepo nemafungu emvura; zvikaguma, kukadzikama.
25 Zvino akati kwavari: Kutenda kwenyu kuripiko? Vakatya nokushamiswa, vakataurirana vachiti: ndiyaniko uyu zvaanorayira kunyangwe nemhepo nemvura zvichimuteerera.
Chidzidzo: tinonamatira nguva dzakanaka, asi hadzina zvakanaka zvadzinovaka matiri sezvo dzinototibvisa kubva panaJesu kana zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka. Tinoita zvese zvatinogona kuti tinyenyeredze nguva dzakashata, asi zvinhu zvikaenda nenzira isiri iyo tinobatira Mwari zvakazara.
Mukubudirira tinokusha mbeu dzekukanganisa nekusatsvaga Jesu. Mukukundikana tinokusha mbeu dzekubudirira kupfurikidza kuona kuti Jesu akatikoshera zvakadii.
Munyika yeGerasa maive nemurume waive akashama, akazadzwa namadhimoni mazhinji. Aigara mumarinda, nzvimbo dzevakafa. Madhimoni akakumbira kupinda munguruve dzaive pedyo. Satani aive munyoka mumunda weEdeni. Parizvino madhimoni ake aive oda kugara munguruve. Mweya yakaipa inofara kugara mumhuka, asi Mwari anoda bedzi kugara mumoyo yevanhu.
RUKA 8:32 Zvino kwakanga kuripo boka guru renguruve zhinji, raifura mugomo: ikakumbira zvikuru kwaari, kuti aitendere kupinda madziri; akaitendera.
33 Mweya yakaipa ikabuda kumunhu, ikapinda munguruve, ipapo boka rakamhanyira kumawere kugungwa, rikabitirwa.
Nguruve dzakazadzwa nemadhimoni dzikasarudza kuzvinyudza mumvura.
RUKA 8:34 Vaidzifudza vakati vaona zvaitwa, vakatiza, vakandovudza izvozvo muguta naparuwa.
Mwari akaita munana. Asi zvakavatorera mari zhinji nekuti vakarasikirwa nenguruve dzavo. Nekuti vaive varasikirwa nemari vakatiza. Vanhu havatambiri kurasikirwa nemari, kunyangwe kana ari Mwari ari kubata pazviitiko izvozvo. Vanotosarudza kutiza kubva pamberi paJesu. Ndirwo rudo rwatiinarwo isu vanhu nemari. Zvikurusei, rudo rwatiinarwo nemari rwakakura kukunda rudo rwedu kuna Mwari.
LUKE 8:35 Vakabuda kundovona zvaitwa; vakasvika kuna Jesu, vakandowana munhu, makanga mabuda mweya yakaipa maari, agere patsoka dzaJesu, apfeka, ava munhu kwaye, vakatya.
Madhimoni aive amukurura nguvo dzake dzose asara akashama. Asunungurwa kubva kumadhimoni chinhu chekutanga chaakaita kutsvaga nguvo zvakare. Saka anokurura nguvo kuvakadzi vemazuva ano ndiyani? Zvinorevawo kuti vanhu vanofamba vakashama havana kukwana munjere dzavo.
RUKA 8:37 Vanhu vose venyika yakapoteredza yavaGerasa vakakumbira kwaari kuti abve kwavari, nokuti vakanga vabatwa nokutya kukuru. Akapinda mugwa akadzoka.
Nekuti vakarasikirwa nemari pakanyura nguruve dzavo, maJuda vaive vasisina chavaida pana Jesu. Vaida chitendero chisina zvipiriso.
RUKA 8:38 Asi munhu uyo makanga mabuda mweya yakaipa maari, wakakumbira kwaari kuti agare naye. Asi wakamudzosa, achiti:
39 Dzokera kumba kwako, undotaura zvinhu zvikuru zvawaitirwa naMwari. Akaenda, akandoparidza muguta rose zvinhu zvikuru zvaakaitirwa naJesu.
Kazhinji Jesu aiudza vanhu kuti vanyarare pamusoro peminana yaaiita. Izvi zvaidzivisa kuti vanhu vazhinji vasamutadzise kufamba paaitenderera. Jesu aive asina waaida kuti ashambadze simba rake. Huvepo hwake hwaizvishambadza hwega. Minana yake yaive yemahara, zvaikwezva vanhu vazhinji kwazvo vaida kumushandisa kuzviwanira minana, asi vasina chido nekuziva chokwadi chakazara.
Dzidziso yekubudirira inokurudzira vanhu kuti vashandise Mwari pakuda kuzviunganidzira pfuma, asi vasina shungu nechokwadi chemuBhaibheri.
Asi nekuti vanhu vazhinji vakamuudza kuti aende kure, akasiya munhu waaive aponesa kuti aparidze nhau iyi yekuti vanhu vairasikirwa nei pavaimudzingira kure.
Kuwedzera, munana uyu waive waita kuti vanhu varasikirwe nemari. Saka kutevera Jesu kwaive kusingangouyi pachena. Zvinosanganisira kuzvipira nekurasikirwa nezvizhinji. Saka avo vaive vachizvipira kuripa muripo kuti vawane Evhangeri, pachinzvimbo chekuzviunganidzira kubva kwariri, vanomutambira zvakare. Ava ndivo vaive rudzi ruri nani rwevateveri.
RUKA 8:40 Zvino Jesu wakati achidzoka, vazhinji vakamugamuchira, nokuti vose vakanga vakamumirira.
Ruka sachiremba akataura pamusoro pechiitiko chehurwere hwekuti vanhu vaive vasisina tariro, apo mukadzi aive ashandisa pfuma yake yese kusara asina achiedza kutsvaga rubatsiro kunanachiremba.
RUKA 8:43 Ipapo mumwe mukadzi aivenokurwara kwekubuda ropa kwemakore anegumi nemaviri, wakanga apedzera pan’anga zvose zvaairarama nazvo, asingaporeswi neimwe.
44 Akavuya mashure make, akabata mupendero wenguvo yake, pakarepo, kubuda kwake kweropa kwakaguma.
Kubata mukombero wenguvo yake chete kunyangwe iye aisamuvona kwaive kwakakwanira kumuporesa.
Mukadzi uyu aimiririra kereke inotora simba remweya nekuwadzana naJesu.
Kana tikava kumashure kwaJesu tikamutevera, anotibatsira sezvaakaita mukadzi uyu.
Jairosi aive mutongi wesinagoge akakumbira Jesu kuti avuye kuzoporesa mwanasikana wake.
Asi vakabva vatambira shoko kuti aive atofa.
RUKA 8:50 Zvino Jesu wakati achinzwa akapindura akati: Usatya tenda bedzi, iye uchaponeswa.
51 Zvino wakati asvika kumba, akasatendera munhu kupinda naye, asi Petro, naJohane, naJakobo, nababa vomusokana naamai.
52 Vose vakanga vachichema, vachimuririra. Iye akati: Musachema haana kufa, asi uvete.
53 Vakamuseka, vachiziva kuti wafa.
Kuchema kwavo kwaive kusiri kwechokwadi nekuti hakuna munhu angabve pakuchema chaiko otoseka ipapo.
RUKA 8:54 Zvino iye wakabata ruvoko rwake, akadana, achiti: Musikana, muka!
55 Ipapo mweya wake wakadzoka, akamuka pakarepo. Akaraira kuti apiwe zvokudya.
56 Vabereki vake vakashamiswa, asi wakavaraira kuti varege kuvudza munhu zvaitwa.
Kumutswa kubva kuvakafa uku kwaishamisa, asi Jesu haana kuda kushambadza chishamiso chake ichi. Vanhu vanoda kutsvaga mbiri uye voshambadza kubudirira kwavo.
Kumutswa kwemusikana uku kwaisazova chiratidzo chinozunza vaIsraeri. Chaive chiratidzo chekumuka kwekereke duku yevaHedeni kubva kudzidziso dzakafa dzechipegani munguva yekereke yekutanga. Kereke iyi yaizopihwa kudya kwakasimba zvinomiririra dzidziso dzechokwadi dzemuTestamente Itsva.
Asi maJuda haana kutenda kuti Jesu aizotendeukira kuvaHedeni.
Saka Jesu aisada kuti shoko iri ripararire pakati pemaJuda nekuti vaisazotambira kukosha kwazvo, kunyanya nekuti maJuda aizoramba Jesu.